1. उपहारको लागि कहिलेकाँही यो लामो सिलिन्डरमा आउँछ जुन हामी गोप्य रूपमा यसलाई भ्रमित गर्न सक्छौं कसरी सिलिन्डर गिफ्ट र्यापि do गर्ने? आज हामीसँग एउटा उपहार दिनेबाट खुशी बनाउने एउटा तरीका छ। र प्राप्तकर्ताबाट सन्तुष्टि भर्नुहोस् जसले पहिलो चित्रबाट प्रत्येक चरणमा शिल्प कौशल र हेरचाह देखेका छन् यस विशेष उत्सवमा उपहार प्राप्त गर्ने सबैलाई लपेट्नु हो। हाम्रो कोमलता र हेरचाह हेर्नुहोस् साथै, समाप्त भएपछि तपाई अत्यन्त गर्व महसुस गर्नुहुनेछ।
2. उपकरण प्रयोग गर्न सिलिन्डर उपहार र्‍याप
3. - उपहार र्‍याप प्रापकको चरित्रसँग मेल खाने छनौट गर्नुहोस्। उपयुक्त र colorsहरू र बान्कीहरू प्रयोग गर्दै यस युगमा प्राकृतिक फाइबर कागज खोज्दै हुन सक्छ। यसले न्यानो र विशेष भावना दिन्छ, यो अनौंठो छैन यदि यो ठूलो बेलनाकार बक्स हो भने, चयनित कागज ठूलो हुनुपर्दछ। वा ब्लेन्डबाट कागजलाई सँगै एक राम्रो र्याप बनाउन प्रयोग गर्नुहोस् - धनु वा रिबन जुन आफैलाई बनाउन सजिलो हुन सक्छ वा सुक्खा फूलसँग जोडिएको हुन सक्छ अर्को प्यारो। - कागज काट्ने, रिबनको धनु कटौतीको लागि प्रयोग गरिएको कैंची। - पारदर्शी टेप ग्लू र डबल पक्षीय चिपकने - सिलिन्डर बक्स तपाई यसलाई उपहारको साथ सही आकारमा लगाउन सक्नुहुनेछ। वा थोरै लामो यदि यो एक उपहार बाकस स्थान सजाउन प्रयोग गरीन्छ त्यसो भए राखिएको आकार छान्नुहोस् र उल्लेखनीय हेर्नुहोस्
4. चरणहरू र कसरी एक सिलिन्डर उपहार लपेट्न।
5. - फिट हुन सिलिन्डर बक्स वरपर कागज मापन गर्न शुरू गर्नुहोस्। दुवै फराकिलो र लामो पक्ष - शीर्ष र तल समान रूपमा तह लगाउनुहोस् - छेउको बक्समा पारदर्शी टेपको साथ कागजको अन्त्य सुरक्षित गर्नुहोस्। र अर्कोपट्टि डबल चिपकाइएको छ ताकि कुनै ट्रेस देखिने छैन। कागजको अन्त तल तान्नुहोस् र पारदर्शी टेपको साथ तय गरिएको। - सहि कोणमा खुशी पार्न कोसिस गर्नुहोस् र पारदर्शी टेप समय-समयमा प्रयोग गर्नुहोस् जुन हामीले माथि राख्दछौं रमा राख्न सकिन्छ सर्कलको अन्त्य सम्म पीछा गर्नुहोस्। र दुबै पक्षहरू गर्नुहोस्
6. - कागजलाई गोलोमा काट्नुहोस् र माथिको स्टिक गर्नुहोस्।
7. - रिबन शीर्षमा सुन्दरताका साथ राख्नुहोस् - सकियो। जाँच समाप्त भयो र डेलिभर गरियो
8. यो गाह्रो छैन कसरी एउटा सिलिन्डर उपहार बेर्ने र प्राप्तकर्तालाई अर्को आशा पनि दिन सक्छ बक्सको आकार यस्तो देखिन्छ। तपाईं उपहारको रूपमा के पाउनुहुनेछ? र बर्षको अन्त्यमा एक सिलिन्डर उपहार बक्स व्यवस्था गर्न सकिन्छ। घरको सजावट वा क्रिसमस कुनाको रूपमा विभिन्न आकारहरूको परिप्रेक्ष्य आयामहरू प्राप्त गर्न पुन: सुन्दरता र खुशी थप्नुहोस्, सजिलो र गाह्रो छैन।
9. प्रेम र इरादाको साथ केहि गर्न नतिजा सँधै राम्रो हुन्छ, आफ्ना बच्चाहरूलाई आमन्त्रित गर्नका लागि उपहार र्‍यापिंग गतिविधिमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्नुहोस्। यद्यपि कौशल सबैभन्दा सुन्दर बाहिर आउँदैन तर माया र हेरचाह यो परिवारमा एक प्यारा गतिविधि हो। अर्को न्यानो गतिविधि जुन तपाईं प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ !!